Scalloped အာလူးကြော် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
buttercream icing ကိုဘယ်လောက်ကြာကြာသိမ်းထားမလဲ
ပြောင်းဖူးရည်မပါဘဲဆန် krispie scotcheroos
Scalloped အာလူးများသည်လွယ်ကူသောဂန္ထဝင်စာရွက်ဖြစ်သည်။ သင့်အီစတာညစာ၊ ခရစ်စမတ်၊ ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်းနှင့်တနင်္ဂနွေညစာအတွက်ပင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဒီဘေးထွက်ပန်းကန်ထဲမှာ, ပါးလွှာသောအာလူးနှင့်ကြက်သွန်နီတစ် ဦး လွယ်ကူသောအိမ်လုပ်မုန့်ငံပြာရည်အတွက်အလွှာနှင့်နူးညံ့ရွှေ, bubbly သည်အထိဖုတ်နေကြသည်။ အာလူးစုံလင်ခြင်း!
ကနေအားလုံးအာလူးဘေးထွက်ဟင်းလျာများ၏ အာလူးကြော်မီးဖို ရန် ပြီးပြည့်စုံသောဖုတ်ထားသောအာလူး , အဘယ်အရာကိုမျှနှစ်သိမ့်အစားအစာ scalloped အာလူး၏ creamy ခြမ်းကဲ့သို့ (creamy buttery မှလွဲ။ ။ ) အာလူးကြော် ) ။
ဒါကြောင့်အတိအကျ Scalloped အာလူးဘာတွေလဲ? အင်္ဂလန်မှဆင်းသက်လာသည်ဟုယူဆရသည် 'scallop' ဟူသောစကားလုံးသည်အခြေခံအားဖြင့်အာလူးများကိုမည်သို့ခွဲခြားသည်ဆိုသည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သည်။ ပါးလွှာပြီးအညီအမျှဖြတ်ထားသောအာလူးများကို casserole ပန်းကန်ထဲ၌ထည့်ပြီးကြက်သွန်နီကြက်သွန်နီငံပြာရည်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ပြီးဖုတ်ရမည်။ ရလဒ်ဤအာဟာရ scalloped အာလူးစာရွက်ပါ!
အာလူး ယူကွန်းရွှေအာလူး (သို့မဟုတ်အနီရောင်အာလူး) သည်နူးညံ့သောအသားအရေရှိပြီးအခွံမလိုအပ်ပါ။ Russet အာလူး (သို့) အိုင်ဒါဟိုအာလူးများသည်အလုပ်မလုပ်ဘဲကွဲထွက်သွားလေ့ရှိပြီးကောင်းမွန်စွာအရသာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ကြက်သွန်နီ ဤစာရွက်တွင်ကြက်သွန်နီသည်အရသာများစွာကိုထည့်သွင်းပေးပြီးဂန္တ ၀ င်ပါဝင်သည်။ အလွန်ပါးလွှာစွာအချပ်။
Cream ဆော့စ် ဂျုံမှုန့်၊ ထောပတ်၊ နို့နှင့်ဟင်းရည်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအချဉ်ရည်။ သငျသညျဒိန်ခဲထည့်သွင်းချင်လျှင်, အပူထဲကငံပြာရည်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်လက်တဆုပ်စာသို့မဟုတ်ဖျက်စီးဒိန်ခဲနှစ်ခုအတွက်နှိုးဆော်။ ဒါဟာငံပြာရည်၏အပူမှအရည်ပျော်ပါလိမ့်မယ်။
ရာသီ ဒီစာရွက်ထဲမှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းရာသီဥတုမှာဆား၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ကြက်သွန်၊ ကြက်သွန်ဖြူတွေပါဝင်တယ်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အကြိုက်ဆုံးများတွင်ထည့်သွင်းပါ။
scalloped အာလူးခြစ်ရာကနေပြုလုပ်ခြင်းအချိန်ယူပေမယ့်လွယ်ကူပါတယ်။ scalloped အာလူးမှာဒိန်ခဲမရှိပေမယ့်တစ်ခါတစ်လေမှာနည်းနည်းထပ်ထည့်တယ်။
အာလူး, ကြက်သွန်နီနှင့်ငံပြာရည်အလွှာ။ ဖုံးအုပ်ထားပါ။
အရေးကြီးတယ် ငံပြာရည်ထူဖို့ခွင့်ပြုမထမ်းဆောင်မီမိနစ် 20 အေး။
Perfect Scalloped အာလူးများအတွက်သိကောင်းစရာများ
အာလူးချပ် အညီအမျှ scalloped အာလူးအညီအမျှချက်ပြုတ်သေချာစေရန်
a ကိုသုံးပါ mandolin ဒီအလုပ်အပိုအမြန်အောင် (က ဒီတစ်ခုကဲ့သို့ $ 25 mandoline အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးအချိန်ကုန်သက်သာမယ်)
TO သို့ ဂျင်း တစ် ဦး များအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါတယ် creamy ဆော့စ် ။ roux ဆိုတာအဆီချက်ပြုတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ (ဥပမာ - ထောပတ်အမှုန့်ဖြစ်ရင်ထောပတ်) နဲ့ဂျုံမှုန့်ကိုပေါင်းထည့်ဖို့ပဲ။
သင်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင် ဒိန်ခဲထည့်ပါ (တကယ်ကဤသို့ဖြစ်စေမည်သည့်) ငံပြာရည်ရန် အာလူး Au Gratin ) မီးဖိုပေါ်မှငံပြာရည်ကိုဖယ်ရှားပြီး 1 1/2 မှ2ခွက်ဒိန်ခဲ (နှင်းဆီ - gruyere ကြီးမြတ်ရွေးချယ်မှုများ) အတွက်နှိုးဆော်။
မုန့်ဖုတ်နေစဉ်သတ္တုပါးဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပါက၎င်းကိုရေနွေးငွေ့နှင့်အလိုအလျောက်အာလူးများကိုအနည်းငယ် ပို၍ မြန်စေသည်။
အချိန်ကိုကြိုတင် Scalloped အာလူးစေရန်
ဤအရာများကို ကြိုတင်၍ (အမှုတော်ဆောင်သည့်နေ့၌အစာရှောင်ခြင်းချက်ပြုတ်နေရန်) ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမုန့်ဖုတ်ခြင်းအားရလဒ်ကောင်းများဖြင့်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
မုန့်ဖုတ် ပန်းကန် 50-60 မိနစ်ခန့်ဖုံးလွှမ်း။
မီးဖိုကနေ Remove နှင့် အေးတယ် လုံးဝကောင်တာပေါ် (သူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းထားခဲ့ပါရေနွေးငွေ့ချက်ပြုတ်ပြီးအောင်ကူညီလိမ့်မည်) ။
ကောင်းစွာဖုံးအုပ်နှင့် ရေခဲသေတ္တာ ။
အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်သည့်နေ့၌, မုန့်ဖုတ်မတိုင်မီအနည်းဆုံးမိနစ် 30 မိနစ်ရေခဲသေတ္တာထဲကနေဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ မုန့်ဖုတ်အကြောင်းကို 35 မိနစ်သို့မဟုတ်တဆင့်အပူသည်အထိအဝတ်မခြုံဘဲ။
နှစ်ခါဖုတ်ထားသောအာလူး - ရှေ့သို့ လုပ်၍ အေးခဲပါစေ။
တင်ထားသော Mashed အာလူးကိတ်မုန့် - ကျန်ကြွင်းများအတွက်အကြီး။
Cheesy Ham နှင့်အာလူး Casserole
ဖုတ်ထားသောအာလူးဟင်းချို - လွယ်ကူသောတစ်ပတ်တာညစာဖြစ်သည်
ပြင်ဆင်ချိန်၂၅ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၁ နာရီ နှစ်ဆယ် မိနစ်များ အနားယူချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၁ နာရီ လေး မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၆ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilsson Scalloped အာလူးဟာအကောင်းဆုံးအာလူးအိုးပါ။ ရွှေပြည့်စုံဖို့ဖုတ်ထားတဲ့ creamy ကြက်သွန်ဆော့စ်ထဲမှာအာလူးတင်ထားပါတယ်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢¼ ခွက် ထောပတ်
▢နှစ် လေးညှင်းပွင့် ကြက်သွန်ဖြူ minced
▢¼ ခွက် ဂျုံမှုန့်
▢၁ ခွက် ကြက်သားဟင်းရည်
▢၃ အလေးချိန်ပေါင် အာလူးဖြူ about အကြောင်းကိုအချပ်အထူ
အလယ်အလတ်နိမ့်ကျသောအပူချိန်တွင်ထောပတ်၊ ကြက်သွန်နီနှင့်ကြက်သွန်ဖြူအရည်ပျော်စေရန်။ ကြက်သွန်နီကိုနူးညံ့စေပြီး ၃ မိနစ်ခန့်အထိချက်ပြုတ်ပါ။ မုန့်ညက်ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့် 1-2 မိနစ်ချက်ပြုတ်။
အပူကိုအနိမ့်သို့လျှော့ချပါ။ နို့နှင့်ဟင်းရည်ကိုပေါင်းစပ်။ ထူဖို့ whisking အချိန်တွင်သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုထည့်ပါ။ အဆိုပါအရောအနှောအလွန်ထူဖြစ်လာလိမ့်မယ်, ချောမွေ့သည်အထိတစ်ချိန်တည်းမှာ whisking တစ်ချိန်ကအရည်နည်းနည်းဆက်ပြောသည်။
အရည်အားလုံးပေါင်းထည့်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်အလယ်အလတ်အပူကျော်ဆူအောင်လုပ်ပါ။ ဆားနဲ့ငရုတ်ကောင်းအတွက်ကြော်ပြီး 1 မိနစ်ခန့်ပြုတ်ပါ။
9'x13 'မုန့်ဖုတ်ဟင်းကိုအမဲဆီ။ potatoes အောက်ဘက်ရှိအာလူးများကို and ထားပါ။ ဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်းဖြင့်ရောစပ်ပါ။ ထိပ်ပိုင်းကျော်မုန့်ငံပြာရည်ငံပြာရည် our လောင်း။
မုန့်ငံပြာရည်နှင့်အတူအဆုံးသတ်အလွှာကိုပြန်လုပ်ပါ။ ၄၅ မိနစ်ခန့်ဖုံးအုပ်ထားပါ။
အပို ၃၅-၄၅ မိနစ်သို့မဟုတ်ရွှေအညိုရောင်နှင့်အာလူးနူးညံ့သည့်အထိမဖုံးထားပါ။ ရွှေထိပ်ကိုရရန် 3-4 မိနစ်အစာစားပါ။
အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ခြင်းမပြုမီ 15 မိနစ်အနားယူရန်ခွင့်ပြုပါ။
သော့ချက်စာလုံးအာလူး scalloped သင်တန်းအရံဟင်း ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
Scalloped နှင့် Au Gratin အာလူးများအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။
Gratin au အာလူး ထို့အပြင်ဒိန်ခဲအာလူးဟုလည်းခေါ်သည်။ အဖြူရောင်ငံပြာရည်သည်အမှန်တကယ်ဒိန်ခဲဆော့စ် ဖြစ်၍ (၎င်းတို့သည်ဒိန်ခဲများကိုအလွှာများနှင့် / သို့မဟုတ်ပေါင်မုန့်ထိပ်များကြားတွင်ဖြန်းထားသည်။ )
ဒီအာလူးကြော် (ဒိန်ခဲ) ကိုဒိန်ခဲဖြင့်ထည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဒိန်ခဲထည့်နိုင်သည်၊ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံဒိန်ခဲမပါဘဲဤစာရွက်တွင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကိုငါသဘောကျသည်။ ကြက်သွန်နီနှင့်နို့တို့၏ချိုမြိန်မှုသည်အာလူးများကိုအချပ် လိုက်၍ ပြီးပြည့်စုံအောင်ဖြည့်နိုင်သည်။
ဒီအာလူးတွေဟာရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ၄ ရက်လောက်နေပြီးမိုက်ကရိုဝေ့ (ဖ်) မီးဖို (သို့) ဒယ်အိုးထဲမှာကောင်းကောင်းအပူပေးပါ။ အကယ်၍ သင်သည်၎င်းတို့ကိုကြာရှည်စွာအေးခဲစေလိုပါက scalloped အာလူးများကိုအေးခဲစေနိုင်သည်။
casserole ဟင်းတစ်ခွက်နီးပါးသည်ဗဟုသုတနည်းနည်းဖြင့်perfectlyုံအေးခဲစေနိုင်သည်။ ရေခဲသေတ္တာတစ်လုံးစားလျှင်အာလူးကြော်များကိုအေးခဲစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ၎င်းတို့အားလုံးကိုအပြည့်အဝချက်ပြုတ်ရန်မလိုသော်လည်း၊ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာသူတို့အအေးခံလိုက်တာနဲ့ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်မထည့်ခင်သင်လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုဖြုတ်ပြီးဂရုတစိုက်ခြုံပါ။ အာလူးများကိုနူးညံ့သည့်အထိအပူပေးပြီးချက်ပြုတ်ပါ။
၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သော်လည်းကျန်အကြွင်းအကျန်များကိုကျွန်တော်တို့မကြာခဏအေးခဲစေလိုသည်။ ဤအမှု၌, ဤ scalloped အာလူးကောင်းစွာအေးခဲပေမယ့်ငါအပူပေးတဲ့အခါသူတို့ကတစ်ခါတစ်ရံအနည်းငယ်ဖြိုဖျက်ပေမယ့်သူတို့ကအကြီးအရသာနေရှာတွေ့!
ဒီ Fantastic Casserole REPIN
cordon bleu နှင့်အတူအဘယ်သို့စားရမည်နည်း